Iingoma eziphezulu ezivela kwi-80s Rock Band Men Work
Nangona iAustralia Men at Work ingabonakalisa umdla onokwakheka kwi- reggae eyayibeka ibhendi kwiindawo eziqhelekileyo zePolisa kwaye isebenzisa i-chiming, ukuhlaselwa kwegitala ekhangeleka njengobungqina obutsha , ekugqibeleni iqela lahlala kwindawo ebonakalayo ngexesha '80s'. Ngelishwa, i-quintet yahlala kuphela i-albhamu ezimbini ngaphambi kokunciphisa umgca wecala ngaphandle kokungabikho okushiyiweyo, ukukhutshwa okwesithathu okukhohliweyo. Sekunjalo, ukukhangela emva kwikhathalogu yebhendi kubonisa umzi womsebenzi othakazelisayo, kubandakanywa ezi ngoma ezilungileyo-ezichazwe ngokulandelana kwexesha.
"Ngubani na onokuba khona ngoku?"
Laura / IMAGES / Getty Images)
Le ngenye yeengoma ze-80s ezona zandi izandi zexesha layo nangona zigqithisa ngokupheleleyo njengeengoma zengoma. Ngaphezu koko, ekubeni ndiyithande le ngoma ngokusondeleyo kwiminyaka engama-35, imela mna njengomnye wexesha lokuzimela kwimihlali yam elide njengomdlali we-rock kunye nomculo we-pop. Ndiyakhumbula ndikhwele ibhasi ekhaya ukusuka kwisikolo kwaye ndikhangele ngefestile njengoko ndixela le ngoma yomculo kunye neengoma, ngokuzondla ngokuzeleyo nangona ndingazi ukuba yintoni umculo omdala uneminyaka eli-10 ubudala. Ngokucacileyo, u-Colin Hay ubhala ngengoma kulo mzila wongcwina ngumoya ogqithiseleyo oqhele ukulawula umculo we-80 we-'ps '.
Isikhuselo Esingaqhelekanga Isiqinisekiso seColumbia
Ukulandela iNombolo 1 "Ngubani na onokuyenza ngoku?" kwakungekho msebenzi olula, kodwa i-Malecle Workstation eSebenzi yayine-ace engxoweni kule ndawo engathandabuzekiyo, isandi esicacileyo esicacileyo, ephindaphinda i-feat ekuqaleni kweye-1983. isigidimi sikaGreg Ham yenye yezixhobo ezikhethekileyo ezikuncedisa i-off-kilter yomzila, iziqulatho ezinxilisayo. I-Co-ebhaliweyo nguHay kunye no-guitarist uRon Strykert, le ngoma ivakalisa imfihlelo kwaye ingabonakali kwiingoma zayo, ezithatha umphulaphuli uhambo lweentsingiselo ezivela kwi-Australian foodstuff degemite ukuya kwii-Brussels naseBombay. Isifundo sokwenyaniso senkcubeko ye-geography.
"Ndiyakubona Emehlo Akho"
Ukwahlula phakathi koMadoda kuSebenzi kunye namanye amaninzi ama-'80s 'ashukumisekileyo amashishini kukuba ama-albhamu yangaphambili azaliswe ngeengqungquthela, ezivakalayo ezifanelwe abaphulaphuli abangaphezu kweemvumi zomculo zomculo ezazidla iimboli zabo. Lo mculo ophezulu we-albhamu kwi-Business njenge-Usual ngumzekelo omnye waloo nto, ephethe umdlalo othandekayo, ogciniweyo ovela kwi-Hay, umbhali wayo wengoma. Ngokwemculo, ayifani nantoni na yonke into ephawulekayo evela kwelinye iqela lomsebenzi, okanye kwi-guitar-based based, i-wave-wave wave, ngolo mba. Okokungafaniyo, kunoko, yinto ecacileyo yokubhala ingoma kunye nomculo wezinto ezibonakalayo apha.
"UDkt. Heckyll noMnu Jive"
Njengoko umzila wokukhokela kunye nomntu ongatshatanga kuMadoda ekuSebenzeni kuka-1983 ukukhululwa, i-Cargo, le ngoma yenza isaziso sokukhawuleza ukuba iqela alizange likhuphe ukungahleleki kwento engamangalisa okanye ukucinga ukuze kuphuculwe ukusebenza kwayo. Ukuxhaswa yi-rollicking, njengama-guitars e-jittery, olu lwakhiwo lweHay luyakha amandla alo ngokukrakra okukhulu, ukuguquka ukusuka kwi-loopy ukuya kufutshane kwiintshukumo zesibini. Ngoko ekugqibeleni, nangona kunzima ukuhamba ngeengxelo ezinzima zikaHay, usicula nge-nimble, ngokuqhelekileyo kuthintela i-aphoristic ingoma efana nale: "Uyayithanda ihlabathi, ngaphandle kwabo bonke abantu."
Nangona le nqanaba ephakamileyo yezoshishino ezihambelanayo (ifikelele kwi-Top 10 kumntu omdala onobudala kunye neentlobo zamatye eziqhelekileyo kunye ne-Hot 100), ngokwenene isebenza njengomzekelo ongaqhelekanga wezinga eliphezulu elivumela ukubuyiswa okuphezulu. Ndandisoloko ndicinga ngale ndlela, i-tracktured track njenge-stunner epheleleyo, ingoma eyakhelwe kwiziseko eziqinileyo kwibhodi. Kwiminyaka yakutshanje, ndibuye ndifumanise ubuchule bukaHay kumanqanaba amaninzi, kodwa kule ngoma yodwa kunezinto ezininzi zobungcweti, ukusuka kwi- saxophone yeHam yokuhlambalaza eya kwi-strykert ecocekileyo yecaritori inxalenye yenkqubela elula.
Ngomsebenzi wayo omfutshane, amadoda eSebenzi angase aqokelele ama-pop hits amane aphezulu, impumelelo enokubonakala ilinganisekanga kwimiba emithathu kunye neengamashumi eminyaka. Nangona kunjalo, iinqununu ezimbalwa zexesha elitsha lokutshatyalaliswa linokuthi zivelise amaninzi amaninzi ahlukeneyo njengeli bhanti, kunokuba zithembele kwiziganeko ezizodwa zomsindo wazo, ngokungazi okanye ngokungazi. Kodwa la mabini amakhulu eBhunu ngokuqinisekileyo abazitshilo ngokwabo, njengoko lo mzila ufumana uHay ecinga ukubhujiswa kwenyukliya ngegama elijongene neenkcukacha. Kwakhona, ii-Strykert zomzila wegita zikunceda ingoma iphumelele ngokufanelekileyo.
Iingoma eziphezulu ze-Go-Go ze '80s
Top Rick Springfield Iingoma zee-80s
Yintoni iPlastiki? Inkcazo kwiKhemistry
I-Tendonitis ye-Wrist: unyango kunye nokukhusela
Ngaba i-Dandelions iyashisa ngemibala?
Injongo yeSforzando (sfz)
10 IiNtsholongwane ezingapheliyo kunye nama-Invertebrates
Indlela yokwenza iPet Perfect in Soccer
Iintsholongwane zanamhlanje zilungele phambili kwiMinyaka, i-CDC ifumana